I-Roman Abramovich Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts
Ikhaya ABANTU I-Roman Abramovich Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yomdlalo we-Football Elite owaziwa kakhulu ngokuthi "Billionaire waseRussia". Indaba yethu ye-Roman Abramovich Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, imvelaphi yomndeni, impilo yobungane kanye ne-OFF kanye ne-ON- football amaqiniso amancane angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesimo sakhe sokuqondisa esikhungweni sakhe se-Chelsea Football Club. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abazi okuningi ngo-Abramovich Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Isiqalo sokuphila
Ukuqala, amagama akhe aphelele yi-Roman Arkadyevich Abramovich. U-Abramovich wazalwa ngo-24th ka-Okthoba 1966 eSaratov, eRussia. Wazalelwa nguyise, u-Arkady Abramovich (umphathi wehhovisi likahulumeni) nonina, u-Irina Michalenko (umninindlu).
Nakuba u-Abramovich wayenesiqalo esihle sokuphila njengoba ezalwa emlandweni wesizwe samaJuda esiphakathi. Isikhathi sakhe somntwana saphuthuma ngemuva kokufa kukaMama ngesikhathi eneminyaka eyi-18 kuphela. Ngemva kwezinyanga, u-Abramovich walahlekelwa nguyise, intuthuko eyamenza waba yizintandane ngaphambi kokuba ekhulile 3.
Noma yimuphi umntwana oye waphila ngokulahlekelwa abazali bobabili uzokwazi kahle ubuhlungu obungokomzwelo obungabangela. Imiphumela emibi yengqondo yavela ngokulahlekelwa abazali baka-Abramovich. Imiphumela yaba nomthelela ekuthuthukiseni kwakhe wakhuthazela ezinsukwini zakhe ezisencane.
Ngenhlanhla, umalume kayise, uLeib wathwala umthwalo wokukhulisa u-Abramovich wamyisa e-Ukhta, idolobha elibalulekile lezombusazwe eKomi Republic of Russia.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Imfundo
U-Abramovich osemusha wayefana nabantwana abaningi beminyaka yakhe nesizinda sakhe, ababhalise esikoleni sikahulumeni sika-Ukhta (esithombeni ngezansi). Ngokungafani neontanga zakhe, wayenomqondo webhizinisi owazalwa, isici esenza ukuba aqaphele ukubaluleka kwemali nezinzuzo ezitholakala ekusindiseni.
Ngenxa yalokho, kwakungakabiphi ngaphambi kokuba angene ezweni lebhizinisi ngokuthengisa amathoyizi kanye namathayi emoto asetshenziswe kahle ngenkathi eqhuba imfundo yakhe ekolishi lobuchwepheshe be-Ukhta futhi kamuva, iGubkin Institute of Oil and Gas ehlonishwayo eMoscow.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Umbutho wezempi
U-Abramovich kwadingeka aqede ukulandela ukufundiswa ngemuva kokubhaliswa ngensizakalo yempi yezempi ephoqelelwe e-1974.
Ngenkathi eqhubeka nokuqeqesha, u-Abramovich akazange acabange umsebenzi wokulwa nempi. Esikhundleni salokho, waqamba indlela yokusebenzisa kahle izici zebhizinisi lakhe ngokuthengisa okungagunyaziwe kwephethiloli ezikhulwini.
Isenzo samenza wakhulisa futhi asindisa imali eyengeziwe ngemisebenzi yesikhathi esizayo. Kwaphawula futhi okokuqala phakathi kwezikweletu ezingekho emthethweni ezabekwa kamuva ukuthi zinenzuzo yakhe.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Inkampani yokuqala
Ngenkathi u-Abramovich kungenzeka ukuthi wayenezinhlelo eziningi ezingekho emthethweni, wenza kahle kakhulu ukuqinisekisa ukuthi inkampani yakhe yokuqala, I-Comfort Co-op (umkhiqizi wamathoyizi epulasitiki) wasungulwa ngesisekelo somthetho.
Ukuphumelela kwenkampani yakhe yokudlala kuyamnika ithuba lokuzibandakanya kwezinye izinyathelo ezibandakanya ukuqala ibhizinisi lakhe lokuqala oliyela esifundeni sase-Omsk.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuphakama Ekudumeni
Kuthiwa Ukuphumelela kwenzeka uma ukulungela kuhlangana nethuba, i-max ephumelele kahle uma Mikhail Gorbachov's (Owayengumongameli waseSoviet Union) wavula umnyango wokuzimela emasangweni e-1980s. U-Abramovich wangenelela ngethuba ngokwenza amabhizinisi akhe amaningi asemthethweni ngenxa yezizathu zenzuzo.
Ngemva kwesikhashana, wathola umusa noBerezovsky - osomabhizinisi osondelene kakhulu nomengameli wangaphambili waseRussia uBoris Yeltsin.
Bobabili benza izinto eziningi ezibalulekile zebhizinisi nezombusazwe. Ubungane buka-Abramovich noBerezovsky banikeza i-Launchpad eyamenza wadla namadoda anamandla, yamnika indawo yokuhlala ngaphakathi kweKremlin futhi yamnika amabhizinisi angeziwe avela emikhiqizweni yamafutha kuze kube yizikhumba zezingulube ngisho nokuqashwa kwabaqaphi. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Ubudlelwane bokuphila nokuhlukaniswa okukhulu kakhulu
U-Abramovich nguye owenza inzuzo yebhizinisi ebuhlotsheni bakhe nabanye kubandakanya umshado. Waqala ukushada no-Olga. Umshado waba nomthelela ekuphumeleleni kwempumelelo yakhe yenkampani yakhe yokudlala njengoba umnikelo wakhe womshado wama-ruble ka-2,000 wasebenzisa kahle umgidi wezigidi waseRussia ekwandiseni isitokisi sakhe.
Ngeshwa, lo mbhangqwana uhlukanisile ku-1990 (iminyaka emithathu ngemva komshado wabo). U-Abramovich ubuhlobo obulandelayo abuzange bube yinzuzo. Wahlangana futhi washada nomuntu ophethe umsizi, u-Irina (okufanekisa naye ngezansi).
Okokuqala, konke kwabonakala kahle okwesikhashana ngaphambi kokuba bahlukanise ngenxa yenkinga yakhe ne-23 eneminyaka engu-18 ubudala, u-Dasha Zhukova. Ukuhlukaniswa kwabo okubizayo (okubiza i-£ 155million) kubone ukuthi u-Abramovich walahlekelwa ukugcinwa kwezingane zakhe ze-5 kanye nezindawo ezihlala e-United Kingdom kumuntu owayengumkakhe. Ngaphezu kwalokho, walahlekelwa inani elikhulu lenhloko-dolobha yakhe. Ngempela, impilo ayiyona iNintendo njengoba umuntu engatholi lucky ngaso sonke isikhathi.
Kodwa-ke, kubonakala sengathi u-Oligarch unenhlanhla yesehlukaniso esibizayo njengoba e-2017 eseqede ubuhlobo bakhe noDasha Zhukova (owesifazane obangela ukushaywa komshado wakhe wesibili). Izindleko zokuhlukana kwazo ezabalelwa ku-$ 9B zilandela abaningi, iBrithani enkulu kunazo zonke. Kodwa ubuhlobo babo, kwaholela ekuzalweni kwendodana.
Ngesikhathi salokhu okuthunyelwe. okuncane kuyaziwa ngobudlelwane obuseduze no-Abramovich.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Ukubandakanyeka kwezombusazwe
Ubuhlobo obuseduze no-Abramovich namadoda anamandla eRussia kwakungeyona into ebalulekile. Ukubandakanyeka kwabo kwezombangazwe kwaxoshwa oligarch osemusha owawenza i-foray yakhe kwezombusazwe njengommeli weChikkotka Autonomous Okrug, isifunda esingenampofu eMpumalanga Ekude yaseRussia.
Ngesikhathi ekhonza njengommeleli, u-Abramovich waqala umphumela wokusiza ukunciphisa ubumpofu esifundeni, isinyathelo esivela phakathi kwezinye izinto, sabambelela ekukhetheni kwakhe njengoMbusi weChukotka e-2000.
Kodwa-ke, washiya njengoMbusi we-2008 ukuze agxile ekutheni athole i-Chelsea FC eNgilandi.
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Ubuhlobo NoPutin
U-Abramovich wayengumuntu wokuqala okumele atusa UVladimir Putin njengomphathi womengameli ngaleso sikhathi, kuya Boris Yeltsin. Laba bobabili baye bathola indawo ejwayelekile yokujabulela amandla nezinzuzo zayo ezihambisanayo.
Lezi zingane zazisondele kakhulu kangangokuthi u-Putin u-Abramovich waxoxa nabantu abakhethiweyo beKhabhinethi esikhundleni se-1999, intuthuko ephakamisa imibuzo ephathelene nezinga lika-Abrahamovich ithonya ku-Putin.
Ukuhlala kule ndaba, Ijaji leNkantolo ePhakeme Elizabeth Gloster wabusa ukuthi u-Abramovich akanethonya elincane kuPutin. Ngokusho kwakhe;
"Kwakungenasisekelo sokufakazela ukuthi uMnu. Abramovich usesimweni sokuphatha, noma uMongameli Putin, noma iziphathimandla ekuphathweni kwakhe, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela yokuthi uMnumzane Abramovich afeze ukuhweba kwakhe imigomo. "
I-Roman Abramovich Childhood Story Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuthengwa kwe-Chelsea
U-Abramovich uthenge i-Chelsea ku-2003 ngesikhathi esengumengameli wesifundazwe saseChukotka. Ngokusho kwakhe, ukuthenga iqembu le-then-bankrupt elaliseLondon (ikhaya lakhe lesibili) kwakuyikubalekela ekukhunjweni kodwa abaningi bakholelwa ukuthi unesisusa esiphezulu esinikezwe isimo sakhe semfihlo.
Isivumelwano esinikeze u-Chelsea ezandleni zika-oligarch saphetha emaminithini we-15, isikhathi esifushane esinikeza ukuqashelwa kwamazwe ngamazwe okuphawulekayo ngaphandle kwezwe lakhe eRussia.
Ngesikhathi esisheshayo kuze kube manje, imvelaphi yaseRoma yokuqondisa eqenjini iguqule ibe yinye yamaqembu amakhulu kakhulu emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, kubonakala sengathi uthembekile ekutholeni ukuhlukunyezwa ukuthi phakathi kwezinye izizathu kwamholela ekuthengeni iqembu.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda kwethu I-Roman Abramovich Indaba Yengane kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Elite Football Diary
UMichel Platini Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Gianni Infantino Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Fernando Torres Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso